चीन LET स्कूटर सरल कार्य घण्टा निर्माण र कारखाना | Lenda
कामका घण्टा सरलीकृत गर्नुहोस्
कामदारहरूलाई पा whe्ग्राहरू राख्नुहोस् र काम गर्ने घण्टालाई सरलीकृत गर्नुहोस्।
के तपाईंको कर्मचारीको पाकेटमा पेडोमिटर छ?
तपाईको कार्यालय सानो छ भने पनि, धेरै कर्मचारीहरू हरेक दिन माईल ड्राइव गर्छन्।
हामी एक घण्टा करीव kilometers किलोमिटर मा जाँदै थियौं। यदि कुनै कर्मचारीले एक वर्क डेमा -10-१०,००० कदमहरू लिए भने त्यो kilometers किलोमिटर बराबर हुन्छ र १ घण्टा १० मिनेट लिन्छ। यो कामको हप्तामा hours घण्टा हुन्छ - वा २ in6 घण्टामा बर्ष!
तपाईले कर्मचारीको घण्टाको ज्याला बढाउँदा के हुन्छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ! यदि तपाईसँग आन्तरिक यातायातमा धेरै समय खर्च गर्ने धेरै कर्मचारीहरू छन् भने तपाईले नयाँ विकल्पहरूको बारेमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
LendA इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रतिघण्टा २० किलोमिटरको यात्रा गर्दछ। यदि तपाइँका कर्मचारीहरूले हिड्नुको सट्टा माथिको उदाहरणबाट स्कूटर हटाउँछन् भने यातायात समय सिद्धान्तमा %०% ले घटाइन्छ।
तिनीहरूलाई १ मिनेट र १० मिनेटमा kilometers किलोमिटर हिंड्नुको सट्टा २० मिनेटमा उनीहरूले ड्राइभ गर्न सक्दछन्। यसैले, साप्ताहिक समय खपत १ घण्टा and० मिनेटमा कम गरिएको छ। एक बर्षमा, २०० घण्टा भन्दा कम यातायात समयबाट रूपान्तरण गर्न सकिदैन। योग्य कार्य समय।
त्यहाँ कुनै प्राकृतिक कानून छैन कि कर्मचारीहरूले कार्यस्थलमा व्यायाम गर्न मनपराउँदछन्, तर केही कर्मचारीहरू स्कूटरहरू सर्ने र हाम फाल्ने मन पराउँछन् यो सधैं उचित हुँदैन, त्यसैले मानौं आधा आन्तरिक ट्रान्जिट समय एक पा wheel्ग्राबाट अर्कोमा जान्छ। यो अझै १०० घण्टा सम्म छ ।
आन्तरिक यातायातबाट योग्य काम गर्ने घण्टामा समय बदल्नुको साथसाथै तपाईले केही खुशी कामदारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो आंशिक रूपमा हो किनभने तिनीहरूले काम छोड्नुपर्दछ र सामान्य कामका घण्टामा आफ्नो काम पूरा गर्न अझ धेरै समय पाउनुपर्दछ। प्रायः जसो धेरै मानिसहरूले सोच्छन् कि यो शुद्ध छ। प्याम्पर गर्नुहोस्, र यो स्कूटरमा खेल्न साँच्चिकै रमाइलो छ।